साग्रीला बैंक , कुमारी बैंक , सुदूरपश्चिममान्चल विश्व बिद्यालय र सारदा सरस्वती बिजयी !!
११ माघ २०७६, शनिबार १८:१७ प्रकाशित
महेन्द्रनगर :- स्टार प्रोडक्सनको आयोजनामा महेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा सुपर सिक्स कर्पोरेट क्रीकेट कप २०२० सुरु भएको छ । १४ टिम सहभागी रहेको उक्त प्रतियोगिता ५ बिदाका दिनमा संचालन हुनेछ ।
साग्रीला बैंक २० रनले बिजयी !!
आज भएको पहिलो खेलमा साग्रीला बैंक २० रनले बिजयी भएको छ । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको साग्रीला बैंक निर्धारित ६ ओभरमा २ बिकेट गुमाउदै ८४ रन बनाउन सफल भएको थियो । साग्रीला बैंकका लागि गणेश सिह ठगुन्नाले १८ बलमा सर्बाधिक ४६ बनाएका थिए । अशोक बहादुर चन्दले १६ रनको योगदान गरेका थिए । लक्ष्मी जोशी र सन्तोश चौउलागाइले समान १-१ बिकेट लिएका थिए । ८५ रनको बिजयी लक्ष पाएको नेपाल एस बि आइ बैंक २ बिकेट गुमाउदै ६४ रन मात्र बनाउन सकेको थियो । नेपाल एस बि आइ बैंकका लागि प्रेम सिंह रावलले २० बलमा ३५ रन बनाएका थिए । सन्तोश चौउलागाइले १९ रन बनाए पनि आफ्नो टिमलाई जित दिलाउन सकेनन । साग्रीला बैंकका लागि गणेश सिह ठगुन्ना र खगेन्द्र जोशीले समान १-१ बिकेट हात पारे । उक्त खेलमा म्यान अफ द म्याच साग्रीला बैंकका गणेश सिह ठगुन्ना घोषित भएका थिए ।
सुदूरपश्चिममान्चल विश्व बिद्यालय ५ बिकेटले बिजयी !!
टस जित्दै सानिमा बैंकले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्धारित ओभरमा २ बिकेट गुमाउदै ८३ रन बनाउन सफल भएको थियो । सानिमा बैंकको लागि सागर सिह बिष्टले १३ बलमा ३१ रन , किशोर लेखक ९ बलमा २६ रन र दिपक राज पान्डेयले १४ बलमा अबिजित २४ रन बनाएका थिए । सुदूरपश्चिममान्चल विश्व बिद्यालयका गौतम मिस्र र भरत कुवरले समान १-१ बिकेट लिएका थिए । ८४ रनको बिजयी लक्ष पाएको सुदूरपश्चिममान्चल विश्व बिद्यालयले ४.२ ओभरले १ बिकेट गुमाउदै लक्ष पूरा गरेको थियो । सुदूरपश्चिममान्चल विश्व बिद्यालयका लागि प्रदीप तिवारीले अबिजित १३ बलमा ३६ रन , बाबुराम रावत १० बलमा २७ र गौतम मिस्रले ३ बलमा अबिजित ११ रन बनाएका थिए । सानिमा बैंकका लागि किशोर लेखकले १ बिकेट हात पारे । सुदूरपश्चिममान्चल विश्व बिद्यालय प्रदीप तिवारी म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
कुमारी बैंक ६१ रनले बिजयी !!
टस जितेर ब्याटिङ गरेको निर्धारित ओभरमा १०२ रन बनाएको थियो । कुमारी बैंकका लागि पुष्कर बिष्टले २२ बलमा अबिजित ५० रन बनाएका थिए र रमेश ओझाले १४ बलमा ३८ रन बनाएका थिए । १०३ रनको बिजयी लक्ष पाएको कामना सेवा बिकाश बैंक ४ बिकेट गुमाएर ४१ रन मात्र बनाउन सफल भयो । टंक प्रशाद जोशीले २० रन बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले स्कोर बनाउन सकेनन । पुष्कर बिष्टले २ बिकेट र उमेश भट्ट र बस्यालले समान १-१ बिकेट लिएका थिए । उक्त खेलका म्यान अफ द म्याच पुस्कार बिष्ट घोषित भएका थिए ।
सारदा सरस्वती माबि ४ रनले बिजयी !!
टस हारेर ब्याटिङ गरेको सारदा सरस्वती माबि निर्धारित ओभरमा १ बिकेट गुमाउदै ७५ रन बनाउन सफल भएको थियो । रमेश सिह साउदले १८ बलमा अबिजित ३५ रन बनाएका थिए भने नर सिह भाटले १६ बलमा ३१ रन बनाएका थिए । लिटिल बुद्ध एकेडेमीका राजेश बिष्टले १ बिकेट लिएका थिए । ७५ रनको बिजयी लक्ष पाएको लिटिल बुद्ध एकेडेमी ४ रनले पराजित भएको थियो । लिटिल बुद्ध एकेडेमीका लागि देवेन्द्र कुवरले २३ बलमा ४१ रन बनाएका थिए । सारदा सरस्वती माबिका लागि रमेश सिह साउद , नर सिह भाट , नरेन्द्र चन्द र उद्धब राज जोशीले समान १-१ बिकेट हात पारेका थिए । भने उक्त खेलका म्यान अफ द म्याच रमेश सिह साउद घोषित भएका थिए ।
उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि कंचनपुर क्रीकेट संघका अध्यक्ष बिरेन्द्र चन्द विशिष्ट अतिथिमा प्रदेश छनोट समिती सदस्य बिनोद क्षेत्री र करातेका प्रशिक्षक बिमल खडायतका साथै अन्य अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
११ माघ २०७६, शनिबार १८:१७ मा प्रकाशित